888Poker स्वागत को विश्व शृंखला पोकर तारा स्कट Blumstein, जो Cada र टोनी किलोमिटर गर्न 888Poker बाँच्न लन्डन घटना मा ठाउँ लिन निर्धारित नोभेम्बर । यो थियो एउटा सुन्दर बिहान । सूर्य चमक थियो यसको arse off.र मेरो पत्नी भन्छन्, "म आश्चर्य के मौसम रिपोर्ट छ जस्तै लागि, आज?" के एक मूर्ख कुरा भन्न । चार घण्टा पछि र यो pissing तल । म के थाहा?खैर, म यो थाहा, पछि दुई महिना को यात्रा एशिया भर, यो समय फर्कन बेलायत शनिबार, र जब म arrive in London, it will be चिसो र raining.तपाईं मा शर्त गर्न सक्छन् । धन्यवाद भलाइको लागि लन्डन क्यासिनो पोकर साइटहरु mandiri 24 घन्टा.
It doesn ' t वर्षा भित्र ती.नोभेम्बर मा, 888Poker मा उत्प्रेरित गर्छ Aspers क्यासिनो मा स्ट्राटफोर्ड लागि 888Poker बाँच्न लन्डन । हुन उत्प्रेरित, बारी मा माथि नोभेम्बर 22, र निचोड गर्न हरेक इन्च को कार्य को बाहिर को कुरा, पुस्तक आफ्नो होटल कोठा माध्यम डिसेम्बर3साइटहरु mandiri. देख तालिका, यो हुन प्रतिज्ञा सबैभन्दा महत्वपूर्ण 888Poker बाँच्न लन्डन घटना कहिल्यै छ, र हुन सक्छ पनि चुनौती बार्सिलोना लागि उपस्थित तथ्याङ्कले । त्यहाँ दस घटनाहरू मा lineup र केही firsts । कार्य घडी मा छ खेल मा सबै दस घटनाहरू, र कुनै जीवित प्रतियोगिताको आयोजक कहिल्यै भएको रूपमा, राखे । र 888Poker रही छन् एक सानो ठूलो समय संग एक £5,000 सुपर उच्च रोलर (म शर्त कि मानिस Nitsche संग के कुरा छ कि).उजागर को श्रृंखला को £1,100 किन्न-मा, £400,000 GTD मुख्य घटना छ । त्यहाँ हुनेछ शुरू पाँच उडानहरू, र कार्य ठाँउ लिन्छ Thu Nov 29 Mon, मंसिर3पोकर अनलाइन 24 घन्टा. विजेता पनि बैंक एक 888Poker बाँच्न प्याकेज लागि एक भविष्य घटना । त्यहाँ भएको छ एक £2,200 उच्च रोलर योजना लागि बुधबार, नोभेम्बर 28 पोकर साइटहरु idn winrate tertinggi.
यो एक दुई-दिन घटना संग 100,000 चिप्स र एक 40 मिनेट घडी.लेट दर्ता र असीमित पुन प्रविष्टि उपलब्ध छन् शुरुवात सम्म दिन को 2, जहाँ तिनीहरूले तल खेल्न एक विजेता छ । £5,000 सुपर उच्च रोलर takes place on Sunday, December 2, र खेलाडी 2,00,000 चिप्स र खेल 60 मिनेट स्तर.लेट reg र पुन: प्रविष्टि नियम नै हो रूपमा £2,200 संस्करण । यदि यी दुई मूल्य अंक गर्दै एक बालक extravagant, त्यसपछि गुमाउन छैन एक मनका को पसिना । £220 किन्न-मा उद्घाटन घटना, संग चार-शुरू उडानहरू, promises to beacracker.त्यहाँ भएको छ एक £100 किन्न-मा महिलाहरु को घटना लागि, calmer दुई स्त्री र पुरुष, एक £125 किन्न-मा पट-सीमा ओमाहा घटना, र एक £80 टर्बो DeepStack.र 888Poker छन् खींच मा तारा । 2017 WSOP मुख्य घटना च्याम्पियन स्कट Blumstein खेल्छ रूपमा, गर्छ भन्दा उत्तेजक को एक पुरुष मा पोकर, अहिले, 2009 WSOP मुख्य घटना च्याम्पियन जो Cada न्याय लिग हास्य स्लट betfred. 2018 WSOP मुख्य घटना धावक-अप, टोनी किलोमिटर छ, पनि निर्धारित प्रतिस्पर्धा गर्न । र त्यहाँ पनि एक नयाँ सितारा मार 888Poker टिप्पणी बूथ रूपमा अली Nejad जुडती टीम । यहाँ तालिका भरिएको छ । अक्टोबर मा, टम हल पराजित को एक क्षेत्र 427 प्रवेशकों कब्जा गर्न £78,888 मा पहिलो पुरस्कार £1,100 888Poker बाँच्न लन्डन मुख्य घटना, र जेमी Lunt जिते £2,200 उच्च रोलर पिटाई 69 प्रवेशकों दाबी गर्न £34,985 पहिलो पुरस्कार । अन्य 888Poker समाचार, क्रिस Moorman आफ्नो जीत 29 अनलाइन ट्रिपल क्राउन, गत हप्ता प्रशंसक हेर्न मिल्यो डोमिनक Nitsche तयारी, खेल र busting देखि ठूलो एक लागि एक ड्रप मा एक मिनी-docuseries, र मार्टिन Jacobson जारी गर्न जस्तै हेर्न सबैभन्दा सुन्दर राक्षस मा पोकर.डोमिनक Nitsche मा यो एक ड्रप.नवीनतम प्राप्त जुवा देखि समाचार केल्विन Ayre justificatif क्रेडिट renouvelable banque क्यासिनो.
पोकर अनलाइन 24 घन्टा
पोकर साइटहरु idn winrate tertinggi
न्याय लिग हास्य स्लट betfred
justificatif क्रेडिट renouvelable banque क्यासिनो